Monday February 27, 2017 - 18:56:21 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Aljazaa’ir ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ayaa sheegaya in weerar hubeysan uu ka dhacay saldhig boolis oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda dabadhilifka wadankaasi.
Dagaalyahan mujaahid ah oo xirnaa suun walxaha qarxa lagasoo buuxiyay ayaa la sheegay in uu weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada booliska ee sida melleteriga utababaran.
War kasoo baxay mas’uulka ugu sarreeyo ee laamaha ashahaadda ladirirka xukuumadda Aljazaa’ir ayaa lagu sheegay in ruux hubeysan uu weerar ku qaaday xarunta booliska ee bartamaha magaalada Qusnadiinah oo dhacda bariga wadanka Aljazaa’ir.
Bayaanka kasoo baxay xukuumadda dabadhilifka ah ayaa lagu sheegay in askari booliska katirsan ay rasaas isdhaafsadeen ruux istish-haadi ah kadibna waxaa dhacay qarax weyn oo magaalada laga maqlay.
Warka kasoo baxay dowladda Aljazaa’ir oo ay faafisay wakaaladda wararka rasmiga ah ayaa lagu xaqiijiyay in laba askari oo booliska katirsan ay si xun ugu dhaawacmeen weerarka.
Goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in ay maqleen jugta qarax weyn oo ruxay magaalada Qusnadiinah iyo rasaas lays dhaafsanayay waxaana shaki badan lagelinayaa saxnimada wararka ku aaddan weerarka oo ay xukuumaddu faafisay.
Nuuradiin Badawi oo ah wasiirka arrimaha gudaha dowladda Aljazaa’ir ayaa telefeshinka afka xukuumadda ku hadla u sheegay in weerar ‘Argagaxiso’ dhankooda lagusoo qaaday balse faah faahin dheeri ah kama bixin khasaaraha soo gaaray ciidanka booliska.
Al Jazaa’ir oo aysan kajirin saxaafad madax banaan ayay xukuumaddu sida ay rabto usoo warisaa dhacdooyinka xasaasiga ah sida weerarada mujaahidiinta alqaacidda ee Maqribul islaami ka fuliyaan xarumaha cadawga.
Isbuucii lasoo dhaafay dagaallo culus oo ciidamada melleteriga iyo mujaahidiinta alqaacidda ku dhaxmaray wilaayada albuweyrah oo 125 KM dhanka Koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah waxaa lagu dilay 14 qof.